सङ्कटमा शिविरका सुत्केरी |
सङ्कटमा शिविरका सुत्केरी
प्रकाशित मिति :2016-01-26 11:00:10
सुर्खेतका विभिन्न शिविरमा बसेका बाढीपीडित महिला अहिले पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेल पनि भन्छन्, ‘उनीहरूलाई तत्कालै सहयोगको खाँचो छ ।’ तर, सहयोग गर्नेचाहिँ कसले ?
सुर्खेत । ०७१ को साउनमा आएको बाढीपहिरोले घरबारी बगाएपछि विस्थापित भएका सुर्खेतका बाढीपीडित महिला अहिलेसम्म पनि चिसो शिविरमा बस्न बाध्य छन् । सरकारले पुनस्र्थापनामा ढिलाइ गरेका कारण जिल्लाका अस्थायी शिविरमा पाल टाँगेर बस्दै आएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला दिउँसोको घामको सहारामा बाँचेका छन् । रातको समयमा त्रिपालबाट ओछ्यानमा चुहिने शितका कारण सुत्केरी महिलालाई आफ्नो बच्चालाई चिसोबाट जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । चिसोका कारण सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ ।
लेखपराजुल– २ सुर्खेतकी पुष्पा रामजाली डेढ वर्षदेखि पहिरोले घरजग्गा बगाएपछि शनिमोहरको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी छिन् । पुष्पा चार महिनाकी सुत्केरी हुन् । चिसोले उनका हातखुट्टा सुन्निएका छन् । चारमहिने बच्चा काखमा च्यापेर घामको प्रतीक्षामा रहेकी हुन्छिन् उनी । सुत्केरी अवस्थामा तातो कपडा र आगोको छेउमा बस्नुपर्ने, तर उनी कतिखेर घाम लाग्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेकी हुन्छिन् ।
शिविरमा बस्दाको पीडा सहन नसकेर आँखाबाट आँसु झार्दै उनले भनिन्, ‘चिसोबाट बच्चा जोगाउन एकदमै सकस भएको छ, सुत्केरी भएको चार महिना भयो, त्रिपालबाट चुहिने शितसँगै बस्नुपरेको छ ।’ राहत पाएको एउटा कम्मल पनि सातजनाको परिवारलाई पुग्दैन । आगो बाल्न दाउरा छैन, ओढ्नका लागि कपडा पनि छैनन् । काखमा रहेको बच्चालाई चिसोले निमोनिया भएकाले अब बच्चालाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ उनलाई ।
विस्थापित शिविरमा बस्दै आएकी लेखपराजुल– २ सुर्खेतकै सीता सुनार पनि यस्तै समस्याको सामना गरिरहेकी छिन् । डेढ वर्ष पहिले आएको पहिरोले घरजग्गा सबै लगेपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी उनी सुत्केरी भएको चार महिनासम्म पनि राम्रोसँंग तङ्ग्रिन सकेकी छैनन् ।
सुत्केरी भएको बेलामा खाने र बस्ने ठेगान नभएकाले आमासँगै बच्चा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । पोषिलो खानेकुराको अभाव त छँदै छ, राति पालबाट चुहिएर शरीरमा शित झर्ने हुनाले उनी थलिएकी छिन् । दुःखीलाई भगवानले पनि हेला गर्दा रहेछन् भन्दै उनी भन्छिन्, ‘चार महिनाको बच्चा त भरलाग्दो हुनुपर्ने हो, निमोनिया र चिसोले हालत राम्रो छैन ।’ हातखुट्टा सुन्निएर आफू राम्रोसँग हिँड्न पनि नसक्ने बताउने सीता चिसोकै कारण खोकी लाग्ने, टाउको दुख्नेजस्ता समस्याले सताउँदा पनि उपचार गर्ने पैसा नभएको दुखेसो गर्छिन् ।
समस्या पुष्पा र सीताको मात्र होइन, यतिबेला जिल्लाका सबै शिविरमा रहेका सुत्केरी महिलाको अवस्था दयनीय छ । महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको शिविरमा बस्दै आएकी वीरेन्द्रनगर– ८ इत्रामकी पवित्रा नेपालीको पनि गत वर्षको साउन अन्तिममा आएको बाढीले घरको नामनिसान नै नराखेर बगायो ।
उनी पनि डेढ वर्षदेखि महिला प्रशिक्षण केन्द्रको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी छिन् । सुत्केरी भएको चार महिना भएको छ । तर, उनलाई स्याहार गर्ने आफन्त पनि भएनन् । ६ महिना अगाडि कमाउनका लागि भन्दै श्रीमान भारत गएपछि उनको पनि चिसोमा विजोग भएको छ । उनले भनिन्, ‘चिसोले बच्चा बिरामी भएको छ । ओढ्ने–ओछ्याउने पनि छैन । आगो बाल्नलाई दाउरा छैन, कसैले राहत दिँदैनन्, कसरी दिन काट्ने हो ? त्रिपालबाट शित चुहिएर बिहान उठ्दा ओढेको सिरक भिजेको हुन्छ, चिसोले बच्चा रोएर सुत्न दिन्न रातभरि, हैरान हुन्छ ।’
सुत्केरीलाई चिसोले समस्या पारेको छ भने पुरुषसँग एउटै शिविरमा बस्नुपर्दा महिनावारी भएको समयमा महिला तथा किशोरीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सोही शिविरमा बस्दै आएकी पद्मा कामीले चिसो भुइँमा एउटै बिस्तारामा चार आमाछोरी सुत्न बाध्य भएको बताइन् ।
आफू महिनावारी हुँदा जसोतसो समस्या समाधान गरे पनि छोरी महिनावारी हुँदा धेरै असजिलो हुने उनी बताउँछिन् । महिनावारीको समयमा सरसफाइ र आरामको आवश्यकता परे पनि आफू सधैँ समस्यामा हुने उनको भनाइ छ । बिहानदेखि साँझसम्म समस्या भोग्दै आएकी पद्मा भन्छिन्, ‘घाम र पानीले त्रिपाल चिराचिरा भएजस्तै समस्याले मेरो मन पनि चिराचिरा भएको छ ।’
महिला प्रशिक्षण केन्द्रका अनन्त दाहालले अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका महिलालाई चिसो समयमा त्रिपालामुनि दिन कटाउन गाह्रो भएको बताए । दिनभर घाममा तातिए पनि रातभर त्रिपालमा बस्नुपर्दा आमा र बच्चा दुवै बिरामी पर्ने गरेका छन् । डेढ वर्षअघि आएको बाढी–पहिरोले गर्दा जिल्लाभरका दुई हजारभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भएका थिए । घरवारबिहीन भएका विस्थापित अहिले विभिन्न अस्थायी शिविरमा छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले घरवारविहीन भएका दुई हजार परिवारमध्ये केही घर फर्किएको बताए । घरजग्गा केही नहुनेहरू अझै त्रिपालमै बस्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ ।
हाल महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा २० परिवार बस्दै आएका छन् । प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार अहिले अस्थायी शिविरमा त्रिपालमुनि बस्ने ७० जना महिलामध्ये चारजना सुत्केरी छन् । पौडेल भन्छन्, ‘तत्कालै सहयोगको खाँचो छ, साँच्चिकै विजोग छ उनीहरूको ।’ अब प्रश्न उठ्छ– उनीहरूलाई सहयोग गर्नेचाहिँ कसले हो त ?
(थापा सुर्खेतको साझा बिसौनी दैनिकमा कार्यरत छिन् ।)